किन आउँदैछन् चिनीयाँ प्रधानमन्त्री ?
काठमाडाैं, २० फागुन । चिनीयाँ प्रधानमन्त्री ली कछयाङले एक महिनाभित्र नेपाल भ्रमण गर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ । यही मार्चभित्र ली नेपाल भ्रमणमा आउने भएपछि गोप्यरुपमा भ्रमणको तयारी गरिएको हो । चिनीयाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको सम्भावित नेपाल भ्रमणको
कस्ताे बन्दैछ एकीकृत पार्टीको सांगठनिक संरचना ?
काठमाडाैं, २० फागुन । एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरणपछि बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सांगठनिक संरचनाबारे छलफल केन्द्रित गरेका छन् । संघीय ढाँचाअनुसार केन्द्रीय कमिटीको आकार र संरचना कस्तो बनाउने भन्ने अनौपचारिक छलफलमा उनीहरू व्यस्त छन्
सांसदलाई प्रशिक्षण दिँदै प्रचण्ड र अाेलीले के भने ?
काठमाडाैं, २० फागुन । प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरुवा–बढुवाका फाइल लिएर आफूकहाँ नआउन दुई पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिएका छन् । विकास निर्माणका फाइल बोक्न उनले सांसदहरूलाई सुझाए । ‘आफ्ना नातेदार, दाइभाइ
काठमाडाैं, १७ फागुन । मुख्यमन्त्री चुनिएको १५ दिनपछि प्रदेश ३ को सरकारले पूर्णता पाएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बुधबार एमालेका तीन र माओवादीका तर्फबाट एक मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यसअघि २८ माघमा एमालेका केशव स्थापितले भौतिक पूर्वाधार
रूपन्देही, १७ फागुन । प्रदेश ५ को मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदको पारिश्रमिक मस्यौदा बनाएको छ । मस्यौदाअनुसार मुख्यमन्त्रीको तलब ६० हजार ९ सय छ । मन्त्रीको तलब ५२ हजार रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश सांसदको पारिश्रमिक ४५ हजार रुपैयाँ हुनेछ ।
अझ शक्तिशाली बन्दै प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडाैं, १७ फागुन । झन्डै संवैधानिक निकायको हैसियतमा रहेका महत्वपूर्ण अनुसन्धानमूलक निकायले अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ती सबै निकायलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ।
‘..त्यसैले अब सडक भत्काउन दिइन्न’
काठमाडौं, १७ फागुन । जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले पटक–पटक सडक भत्काइँदा काठमाडौंमा वायु प्रदूषण बढेको भन्दै अब त्यसमा रोक लगाइने बताएका छन् । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सबै संयन्त्रले एकीकृत रूपमा काम गर्ने रणनीति बनाइने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्भवतः अाजै, काे काे बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडाैं, ९ फागुन । एकीकरणको प्रारम्भिक आधारपत्रमा सोमबार हस्ताक्षर भएको छ, अन्तिम तयारी गर्न दुई कार्यदल गठन भएका छन् । राजनीतिक कार्यदल एमाले : माधव नेपाल, भीम रावल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, रघुजी पन्त माओवादी : नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, शक्ति बस्नेत, फम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल
काठमाडौं, ९ फागुन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १८ मन्त्रालय रहने भएका छन् । यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १५ मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्ताव संशोधन गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेस गर्दै छ ।